Cayaartoygii caanka ahaa ee noqday eedeysane la doon doonayo |
Cayaartoygii caanka ahaa ee noqday eedeysane la doon doonayo
Babacar Sarr waa 29-sano-jir cayaartoy ah oo kooxo waaweyn oo dunida ka dhisan usoo saftay, waxaana ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dunida ee lacagaha ugu badan qaata.
Sidoo kale waa eedeysane, dalka Norway ayaa looga haystaa eedeymo kufsi ah, waxaana loo jaray warqad caalami ah oo lagu soo xirayo.
Wuxuu hadda ku jiraa dhuumaaleysi wuxuuna ka mirqay saaxadda cayaaraha.
Sarr waa weerar yahan u dhashay dalka Senegal, kaas oo sumcadda xirfaddiisa ay ku dhisantay dalka Norway, kahor inta uusan u safan kooxo waaweyn oo ka dhisan Ruushka iyo Sacuudiga.
Xiddig ayuu ka ahaa Molde, oo ah naadi weyn oo ka dhisan Norway kaasoo uu ku biiray sanadkii 2016. Labo sano ayuu naadigaasi u dheelayay xilligii uu maamulaha ka ahaa Ole Gunnar Solskjaer – oo haatan ah maamulaha Manchester United.
‘Wuxuu ahaa matoorka kooxda’
“Sarr wuxuu ahaa matoorka kooxda,” ayuu yiri Lars Johnsen, oo ah weriye ka tirsan Josimar, oo ah wargeys arrimaha cayaaraha wax ka qora oo ka soo baxa Norway.
“Nin tayo leh ayuu ahaa, kuna fiican kubadda – wax walba,” ayuu u sheegay Radio 1 Newsbeat.
Balse isagoo xiddig caan ah oo soo ifbaxay, ayuu Sarr wajahay eedeymo dhowr ah oo kufsi la xiriira.
Waxaa makrii ugu horreysay eedeymo lagu soo oogay sanadkii 2015, markaas oo uu ka tirsanaa koox Norway ka dhisan. Waxaa lagu eedeeyay inuu kufsaday haweeney mar uu booqasho ku joogay magaalada Stockholm. Booliiska ayaa baaritaan ku sameeyay balse wax xukun ah kuma aysan ridin.
Kaddib markii uu u wareegay Molde, Sarr wuxuu wajahay eedeymo kale oo kufsi ah. Wuu dafiray dhammaan eedeymahaas.
Bishii March 2018, waxaa markii ugu horreysay lagu xukumay kufsi la sheegay inuu ka dhacay dhisme ku yaalla Molde sanadkii 2017.
Radio Newsbeat oo la hadlay haweeneyda dhibbanaha ah ayaa sheegtay inay soo kacday isagoo “ku dul jiifa”.
Sarr ayaa ka sii btirsanaa Molde kahor inta aan la maxkamadeyn, taas oo ku kalliftay dadka u ololeeya joojinta kufsiga inay ku bannaan baxaan kooxda iyagoo sita boorar ay ku qoran yihiin “Maya waxay la micno tahay Maya”, erayo ka dhan ah kufsiga ayay sidoo kale ka dhahayeen kulamada kooxda.
Bishii August 2018 baaritaan kaddib waxaa Sarr lagu waayay wax dembi ah.
Balse waxaa lagu amray in haweeneyda soo dacweysay uu siiyo magdhow dhan 150,000 oo Norwegian kroner ah (una dhiganta £12,500). Labadoodaba wya ka soo horjeesteen go`aankaas.
Qandaraaskii Sarr ee kooxda Molde ayaa soo idlaaday bishii January 2019, iyadoo ay kooxduna cayaartoyga uga mahad celisay intii uu kasoo tirsanaa.
Dacwaddiisa ayaa mar kale idb loo furay bishii February 2019. Balse dib ayaa loo dhigay, sababtoo ah cayaartoyga iyo qof goobjooge ahaa ayaanan kasoo muuqan maxkamadda.
Dalka Norway, dhegeysiga dacwadda lama bilaabi karo haddii uusan eedeysanuhu ku sugneyn gudaha maxkamadda.
Xilligaas, wuxuu jiray masaafo dhan 4,000 oo mayl, wuxuu ku sugnaa Ruushka.
‘Khalad weyn oo ay booliisku sameeyeen’
Bishii February 2019, Sarr ayaa qandaraas la galay Yenisey Krasnoyarsk, oo ah koox ka dhisan Ruushka.
Naadiga ayaa ka tirsan toddobada naadi ee ugu lacagta badan dunida. Sidaas darteed, waxay Sarr u ahayd horumar sare oo uu xirfaddiisa ka gaaray.
Hannaanka dib u celinta qofka ee ka dhaxeeya Ruushka iyo dalal kale ayaa la aaminsan yahay inuusan ahayn mid hagaagsan.
Kaddib bishii June sanadkii hore, wax yar kahor inta aan la gaarin markii uu ka soo muuqan lahaa maxkamadda Norway, Sarr ayaa heshiis la saxiixday koox kale, oo ka dhisan Sacuudiga.
Dacwad-oogayaasha Norway ayaa cayaartoyga markaas u jaray warqad caalami ah oo lagu soo xirayo iyagoo kaashanaya Interpol, oo ah ururka booliiska adduunka kala shaqeeya dembiyada waaweyn.
Wuxuu ku biiray Damac FC, oo ah koox weyn oo ka dhisan Sacuudiga, isagoo u wareegay dal uusan heshiis dib u celinta qofka ah kala dhaxeyn Norway. Taasi micnaheedu waa inuusan jirin heshiis labada dal ka dhaxeeya oo Sarr dib loogu celinayo Norway si kiiskiisa looga dhegeysto maxkamadda.
Balse bishii January ee sanadkii hore, qandaraaskii Sarr ee kooxda Damac FC ayaa si kedis ah loo soo afjaray.
Damac wax faahfaahin ah kama bixin sababta.
Xilliyadaas, waxaa soo baxay in lagu soo oogay eedeymo kale oo kufsi ah oo ka dhacay Oslo, bishii November 2018.
eedeyntaas labaad ayaa meesha laga saaray sababo la xiriira in booliiska Oslo ay ku guul darreysteen inay muddo saddex bilood ah ku soo qabtaan Babacar Sarr.
Bishii January ee sanadkan ayay soo ifbaxday inaan meelna lagu ogeyn Sarr.
Wax naadi ah oo kale kama uusan soo muuqan, meel kalena laguma arag.
Akoonka uu Sarr ku leeyahay Instagram oo ahayd mid ay bulshadu arki kartay ayaa haatan laga dhigay mid isaga un u furan.